5 Nkà Nkà Igwe Echi Dijital Marketers Kwesịrị Masterkụzi Taa | Martech Zone
N'ime afọ ole na ole gara aga, enwere mgbanwe dị ukwuu n'ụzọ anyị si eji ịntanetị maka ahịa dijitalụ. Anyị malitere site na ịmepụta weebụsaịtị naanị iji nweta data na ọrụ onye ọrụ. Na asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ na oghere dijitalụ, ịnwe weebụsaịtị agaghị egbutu ya. Ndị na-ere ahịa dijitalụ ga-ebido egwuregwu ha iji pụta na mpaghara taa na-agbanwe agbanwe.
Ire ahia na ụwa dijitalụ dị iche na ahịa ọdịnala ejiri mara anyị. Ihe okike bu oru di nkpa; ma, ọ naghị eme ka ihe gaziere gị. E nwere ọtụtụ ngwaọrụ, nka, na ngwa nke ịchọrọ ịma iji bụrụ onye ahịa dijitalụ na-aga nke ọma taa.
N’iburu nke ahụ n’uche, anyị edepụtarala ise ọrụ ga - enwerịrị ike iji nyere gị aka ịkwụsị ọrụ gị ọrụ na ahịa dijitalụ.
Nchọpụta Nchọpụta Nchọpụta
Nchọgharị ọchụchọ dị ka Google na Yahoo na-enyere aka ịkwanyekwu okporo ụzọ na weebụsaịtị gị ma hapụ ndị ahịa ị nwere ike ịchọta gị ngwa ngwa. Site n'inwe ntọala siri ike nke otu SEO na-arụ ọrụ, ị nwere ike ịmepụta mgbasa ozi ahịa ahaziri iche nke ga-eme ka ọhụhụ weebụsaịtị gị na ngwa ọchụchọ.
SEO nwekwara ike imetụta omume onye ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ nwere ike pịa weebụsaịtị ndị a hụrụ na peeji mbụ nke nsonaazụ ọchụchọ ahụ. Ka elu ị nọ na nsonaazụ ọchụchọ ahụ, ọ ka mma ka ị na-ekpughere ndị ahịa.
Ya mere, iji nyere gị aka ịghọta ihe ndị bụ isi banyere SEO, ị nwere ike ịgụ nke a Ntuziaka mmalite nke Google bisara. Ọ bụ nnukwu iwebata SEO.
Otu ụzọ kachasị mma iji soro ma chọpụta ọganihu ahịa gị bụ site na data nchịkọta. N'oge a, ị nwere ike nyochaa ọrụ ndị ahịa yana ihe ha chọrọ ma ọ bụ otu ha si eche maka otu ngwaahịa. Dịka nsonaazụ, usoro mgbasa ozi na usoro dị iche iche emetụtala nchịkọta data.
Nchịkọta data emeela ka o kwe omume ịgbaso njem ndị ahịa, site na mgbe ha pịa weebụsaịtị wee zụta ihe n'otu weebụsaịtị ahụ. Na nke ahụ, ịmara otu esi eji ngwaọrụ nyocha data (dịka Google Analytics, Adobe Analytics, Hubspot, na na) aghọwo ihe achọrọ maka ahịa dijitalụ ọ bụla n'oge a.
UX na UI mmepe
Ahụmahụ onye ọrụ (UX) na Ntuziaka Onye ọrụ (UI) nyere aka na njigide ndị ahịa.
UX mmepe bụ ahụmịhe nke ndị ọrụ na otu ha si emekọrịta na weebụsaịtị / ngwa; mgbe UI bụ mkpokọta mmetụta nke weebụsaịtị / ngwa, ya visual mmewere na Ọdịdị.
Ha niile na-ejide ma na-elebara ndị ọrụ anya na weebụsaịtị ma ọ bụ ngwa. Companieslọ ọrụ E-commerce dị ka Amazon na-etinye ego na UI na UX mmepe iji bulie ọnụego mgbanwe na ịbawanye ahịa n'ịntanetị. Yabụ ọ bụghị ihe mgbagwoju anya ihe kpatara mkpawanye ndị na-emepụta UX na UI.
Asụsụ Nhazi Asụsụ
Mmemme bụ otu n’ime ezigbo nkwado mgbakwunye maka ahịa dijitalụ ọ bụla. N'agbanyeghi na inweghi ihe omuma a ma obu ihe omimi karie omimi, ima ihe di nkpa ga enyere gi aka n'ime ogologo oge.
Mgbe ị ghọtara isi ihe mmemme, ị nwere ike ịmekọrịta mmekọrịta ka mma na otu mmepe. Nwere ike mezuo ebumnuche ahịa gị n'ihi na ị nwere ike iji ya kpụzie ha. E wezụga nke ahụ, ị ​​ga-enwe ike ịkọwapụta na ịkọwa aro bara uru nye ndị otu mmepe.
Koodi bu ihe ohuru na mmuta di nkpa. N'agbanyeghị afọ ole ma ọ bụ ụlọ ọrụ ị nọ na ya, oge adịghị n'oge ma ọ bụ akaha ịmụ ya. Usoro inyocha gị ga-abara gị uru oge niile, ọkachasị ebe ọtụtụ azụmaahịa na-aga n'ịntanetị.
David Dodge, Ekike Egwuregwu, Akwụkwọ akụkọ, Onye Ọzụzụ, na Onye isi nke Aklọ
Usoro njikwa ọdịnaya
content management dị oké mkpa na ụwa dijitalụ. Gụnyere na ihe karịrị ọkara nke weebụsaịtị niile na-eji CMS, ọ bụ ihe ijuanya na ihe kpatara ya ji bụrụ ngwa dị mkpa maka ahịa dijitalụ ọ bụla.
CMS na-enyere ndị ahịa aka ịrụ ọrụ nke ọma, site na imelite weebụsaịtị oge niile iji bulite ọdịnaya ọhụrụ. Ọ na-edozi usoro ọrụ ahụ ma na-enye ndị na-ere ahịa dijitalụ aka ịrụpụta ma mezuo obere oge. Ebe ọ bụ na ọdịnaya na-enye aka na ọkwa SEO, ọtụtụ azụmaahịa na-etinye CMS na weebụsaịtị ha.
Iji mezuo nke ahụ, ịmara ụdị nyiwe CMS dị iche iche (dịka WordPress, CMS Hub, Squarespace, na na) ga-abụ uru. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwekwara ike iji nyiwe ndị a mepụta pọtụfoliyo ahịa gị yana gosipụta ịmara CMS maka ndị nwere ike iwe gị n'ọrụ.
Tags: ọrụ ahia dijitalụoru ahiaoru ahiammemmeANkà na ụzụnkà na ụzụuxWordPress